Cofttek Scholarship - Cofttek Kuwedzera.
Wese munhu anoda basa rakanaka uye dzidzo ichavabatsira kuenda kure. Nekudaro, vanhu vazhinji vanofanirwa kusiya basa ravo uye zvinangwa zvekudzidzisa gore rimwe nerimwe. Cofttek inoziva kukosha kwakadzama kwedzidzo, ndosaka tichibatsira kudzidzisa vaverengi vedu pamusoro peDhivhosi yekuwedzera pamwe nekutarisa kwedu uye nekurudziro.
Yedu Cofttek Scholarship kusimudzira kutsva kwatinodada kwazvo kuzivisa. Iyo $ 2000 yegore negore kudzidza iyo yakagadzirirwa kubatsira vadzidzi kuti vazive zviroto zvavo zvedzidzo uye yebasa. Iyi fanicha inopihwa mudzidzi mumwe gore rimwe nerimwe kuti ibatsire kubhadhara mari yekudzidzira. Tiri kutsvaga kupamhidzira huwandu hwehuwandu hweiyo gore rinotevera.
Yakawanda Sei Iyo Scholarship ye?
Iyi yedzidzo ichapa mudzidzi ne $2000 kubhadhara mari yedzidzo. Icho chidzidzo-chete kudzidza uye hachizovandudzwa zvachose. Inotumirwa kuhofisi yemari.
Scholarship Ndiyani anokodzera kuwana rubatsiro
Tiri kutsvaga mudzidzi anogona chaizvo kushandisa mari yatiri kupa. Vadzidzi vanopedza kudzidza uye avo vakapedza kudzidza vanogona kunyorera, chero bedzi ivo vachinyoreswa nguva yakazara pachikoro chekupedza kudzidza kana kukoreji yakabvumidzwa. Minimum GPA (Giredhi Point Avhareji) kunyorera kufunda ndeye 3.0
Maitiro Ekuita Kwaungaita
Iwe unogona nyore nyore kunyorera iyo kudzidza. Yakagadzirirwa kuve yakapusa kuti ikwanise uye kunyorera. Chikamu cheshoma chevadzidzi chichagona kunyorera, uye mudzidzi mumwe chete ndiye anokwanisa kuhwina.
Heano maitiro aunoita:
Kutanga nekunyora chinyorwa chemazana mazana mashanu emazwi kana anopfuura ezvekuti "Kudya kwekuwedzeredza kushandisa kwakakurumbira kupfuura kare". Iwe unogona kuongorora imwe yedzidzo dzawakapedza uye shandisa izvo kuti kudzidzisa kuti zvichakubatsira sei kuvandudza hunyanzvi hwako. Chinyorwa chinoda kuzotumirwa na December 31st, 2020.
Iwe unozofanirwa kutumira yako kunyorera [email inodzivirirwa] ita shuwa kuti iri muMicrosoft Word format. Shandisa yako yemudzidzi (edu) email kero chete. Ukasvitsa chikumbiro muPDP kana Google Doc, hazvigamuchirwe.
Fomu rekuendesa rinofanira kusanganisira ruzivo rwunotevera: zita rako, nhamba yefoni, zita reyunivhesiti uye yako email kero.
Rondedzero yacho inofanirwa kunyorwa nemazwi ako pachako uye inofanirwa kuve yakakosha kune muverengi.
Chero kubirira kuchaguma nekutumira kwako kunotanga kurambwa pakarepo.
Ipa chete ruzivo rwakatsanangurwa pamusoro apa.
Chinyorwa chako chinotongerwa pane zvakasikwa, kufunga uye kukosha.
Kuiswa kwega kwega kunoongororwa pameso uye musi waNdira 15, 2021, anokunda achaziviswa uye kuziviswa neemail.
Tinoita chokwadi chekuti hapana ruzivo rwevanhu vevadzidzi runogoverwa, uye ruzivo rwese rwega rwunochengeterwa kushandiswa kwemukati chete. Isu hatipe chero ruzivo rwevadzidzi kune vechitatu mapato chero chikonzero, asi isu tinochengeta kodzero yekushandisa zvinyorwa zvakapihwa kwatiri nenzira chero yatinoda. Kana iwe ukaendesa chinyorwa kuCofttek, iwe unotipa kodzero dzese kune izvo zviri mukati, kusanganisira zvevaridzi zvezvakataurwa zvemukati. Izvi ndezvechokwadi kunyangwe iko kuendesa kunogamuchirwa semukundi. Cofttek.com inochengetera kodzero yekushandisa rese basa rakatumirwa kuti rinyorwe sezvo richiona rakakodzera uye parinonzi rakakodzera.